अनुदान होइन सफ्ट लोन दिनुपर्छ « Sahakari Nepal
अनुदान होइन सफ्ट लोन दिनुपर्छ
प्रकाशित मिति :3November, 2016 9:10 am
अध्यक्ष–जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोट
१ जिल्ला संघले के गर्दैछ ?
जिल्ला संघले शिक्षा तथा तालिमका काम गर्दै छ । सहकारीसँग सम्बन्धीति लेखा, कर्जा व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासलगायत विविधखाले तालिम दिदैँ आएका छौं । त्यस्तै दातृ निकायको साझेदारीमा पनि संस्थालाई तालिम दिन्छौं । तीन तहको तालिम चलाउँछौैं । व्यवसायिक तालिम हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा पर्छ । त्यस्तै सदस्य संस्थाको आकश्यकताअनुसार पनि विभिन्न विषयमा तालिम दिन्छौं । त्यस्तै संघले सदस्यता वृद्वि, सहकारी छापाखाना सञ्चालन गरेका छौं । बहुउद्देश्यीय भवन छ । भवनमा कोपरेटिभ पसल सञ्चालनमा छ । सहकारी बैंक, अरु बैंक, कृषि संघ, उपभोक्ता पनि हाम्रो भवनबाट व्यापारिक काम गर्दै आएका छन् ।
२ नुवाकोटका सहकारीको लगानीको प्राथमिकता के छ ?
यहाँका सहकारीको मुख्य प्राथमिकता कृषि र व्यापार नै हो । कृषि, व्यापार र हायर पर्चेजमा सहकारीले धेरै लगानी गरेका छन् । जिल्ला संघमा आबद्व भएका सहकारीले ५ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । त्यसको २० प्रतिशत सञ्चालन खर्चबाहेक अरु लगानी गरेका छन् । संघमा आबद्व भएका सहकारीको शेयर पूँजी ८५ करोड पुगेको छ ।
३ सहकारीको विकासलाई कुन रुपमा हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो बुझाइ अलि फरक छ । काठमाडौंभन्दा नुवाकोटको सहकारी धेरै अगाडि छ । सहकारीलाई भुगोल र पूँजीको आधारमा संकुचन गर्नुहुँदैन् । उत्पादन, सेवा र वित्तीय सहकारीका रुपमा सहकारीदलाई सही ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । सहकारीको अनुगमन आवश्यक छ । सहकारीलाई सस्तो कर सेवा उपलब्ध उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै वित्तीयलाई वित्तिय मौर्दिक नीतिअनुरुप नियमन गर्न आवश्यक छ । ५ करोड भन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारीलाई करमुक्त गर्नुपर्छ । सहकारी–सहकारी मिलेर सामूहिक व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी मिलेर व्यवसायिक घोड दिन सक्दा सरकारले यथेस्ट अनुदान दिनुपर्छ ।
४ सहकारी ऐन संसदमा पेश भएको पनि लामो समय भइसक्यो । ऐन ढिलाई हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएर नै सहकारी ऐन आउनमा ढिलाई भएको हो । सरकारले सहकारी बुझेको छैन् र सहकारीलाई कता लैजाने भन्ने ज्ञान पनि छैन् । ऐन नआउनुको सरकारको सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएरै हो । सहकारीलाई संकुचन गराउदा समस्या सिर्जना हुन्छ । हामीले मन्त्रालय, बोर्ड, विभागमा जताततै सुझाव पठाएको छौं । सहकारीमैत्री ऐन आउन केही समय लागेको होला ।
५ सहकारीमा अनुदानको चर्चा व्यापक हुने गर्दछ, सहकारीको विकासका लागि अनुदान आवश्यक नै हो ?
म अनुदानको विरोधी हुँ । सहकारी सहकारी मिलेर लगानी गर्ने हो भने अनुदान ठिक हो । नत्रभने सहकारी विभागले दिने दुईतीना लाखे अनुदान उचित होइन । त्यसले सहकारीको विकासमा टेवा पुग्न सक्दैन् । यो त राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नै हो । अनुदान लिदाँ लिदैँ सकिन्छ विभागले दिने दुईतीन लाख त । कि त सहकारीले रासायानिक मल खोल्न, विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने त्यस्ता सहकाीलाई अनुनदान आवश्यक पर्न सक्छ । सहकारी मिलेर ठूल्ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन्, त्यसबखत अनुदान चाहिन्छ । सहकारीलाई अनुदान होइन सफ्ट लोन दिनुपर्छ ।